ကလေးများအတွက် Linux ဖြန့်ဝေမှု Linux မှ
ကလေးများအတွက် Linux ဖြန့်ဝေမှု
Linux ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကကစားခြင်းကိုကစားခြင်းနှင့်ကလေးများအားကစားခြင်းထက် (ဥပမာ - အလွန်တရာရှုပ်ထွေးခြင်းစသည်တို့ကဲ့သို့) ဒဏ္myာရီအချို့ကိုဖြိုဖျက်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အတွက်သင့်လျော်သောဖြန့်ဝေမှုအချို့ကိုဆွေးနွေးပါမည်။ အစမစတင်မီမှတ်ချက် - ဟုတ်ကဲ့၊ Linux distro မဆိုယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကသုံးနိုင်တယ်။ ဒီနေ့ကလေးတွေဟာအရမ်းကိုထက်မြက်တယ်။ သို့သော် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းပြီးနားလည်ရလွယ်ကူသောအပိုပစ္စည်းအချို့အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များအတွက်ဖြစ်သည်။
1 ယောက်ျားလေးများအတွက် Qimo:> ၃ နှစ်
2 သကြား: <6 နှစ်
3 Edubuntu: 3-18 နှစ်က
4 LinuxKidX: ၂-၁၅ နှစ်
5 ကလေးများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ၃-၁၂ နှစ်
ယောက်ျားလေးများအတွက် Qimo:> ၃ နှစ်
ကလေးများအတွက် Qimo Ubuntu-based distro သည်ကလေးများအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ၃ နှစ်ကျော်ကလေးများအတွက်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် "ပညာရေးဆိုင်ရာဂိမ်းများ" ပါဝင်သည်။ Interface ကအရမ်းရိုးရှင်းပြီးထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပြီးကလေးများကအရာရာတိုင်းကိုလွယ်ကူစွာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ icon များရှိသည်။
developer များအဆိုအရ Qimo နှင့် Edubuntu တို့အကြားကွာခြားချက်မှာ Qimo သည်မည်သည့်ကလေး၏ PC အတွက် desktop operating system အဖြစ်တီထွင်ခဲ့ခြင်းနှင့် Edubuntu ကိုကျောင်းကွန်ပျူတာကွန်ယက်တွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Qimo တွင်ရှုပ်ထွေးသောမီနူးများ (သို့) ၀ င်းဒိုးများစွာမပါဘဲအသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော interface နှင့် design ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Qimo သည်ယခင်က Ubuntu ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ LiveCD မှတိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သည်။
Qimo သည် XFCE ကို အသုံးပြု၍ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးသည်။ အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များမှာ - CD မှလည်ပတ်ရန် 256MB သိုလှောင်မှု (သို့) 192MB ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံး 6GB disk space နှင့် 400MHz processor သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်။
သကြား: <6 နှစ်
သကြားသည် Fedora အခြေစိုက် distro ဖြစ်ပြီး Prof. Nicolas Negroponte ၏ကျော်ကြားသောစီမံကိန်းအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် လက်တော့ပ် - ကလေးတစ် ဦး (OLPC) ၎င်းသည်အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပျော်စရာပျော်ရွင်စေရုံသာမကသူတို့၏ပရိုဂရမ်းမင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့လာသင်ယူရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုထားသည်။ အားနည်းချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအတန်းအစားတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ကျန် distros များနှင့်အလွန်ကွာခြားပြီး desktop ပတ် ၀ န်းကျင်သည်မည်သည့် Linux နှင့်မဆိုအလွန်ကွာခြားသောကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်အခြား operating system ကိုအသုံးပြုနေပုံရသည်။
Edubuntu: 3-18 နှစ်က
Ubuntu တွင်တရားဝင်ခေါ်ဆိုထားသော Canonical မှဆင်းသက်လာသောဆင်းသက်လာသော version ရှိသည် Edubuntuအထူးမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းများသို့ရည်ရွယ်သည်။
ဤ distro သည်ငယ်ရွယ်သောသုံးစွဲသူများ၊ desktop တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အထွေထွေအသုံးပြုမှုအတွက် "အရသာ" ၃ ခု "young"၊ "plain" နှင့် "default" သုံးမျိုးရှိသည်။ အသုံးပြုသော desktop environment သည် Ubuntu (GNOME) နှင့်တူညီပြီးကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော applications များမှာ OpenOffice.org, KDE Edutainment Suite y Gcompris။ KDE Edutainment Suite တွင်အသက် ၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်လျှောက်လွှာများ၊ Gcompris တွင်မူကြိုကလေးများအတွက်လျှောက်လွှာများပါရှိသည်။
LinuxKidX: ၂-၁၅ နှစ်
LinuxKidX ၎င်းသည်အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်ကြားကလေးငယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် KDE ကို၎င်း၏ desktop environment အဖြစ်အသုံးပြုပြီး slackware ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်အချို့သည် KStars (virtual host)၊ Kalzium (ကျော်ကြားသောဒြပ်စင်များဇယား)၊ KTouch (စာရိုက်နည်းပြဆရာ)၊ KGeography, KWordQuiz, ChildsPlay နှင့်အခြားများစွာတို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းသည်ရပ်ရွာလူထုမှလူကြိုက်များမှုသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုများစွာရှိပုံမပေါ်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ၎င်းကို LiveCD မှပထမဆုံးဖွင့်ပြီး၎င်းကိုနောက်ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၎င်းနှင့်ခဏကစားသင့်သည်။
ကလေးများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ၃-၁၂ နှစ်
Foresight for Kids သည် ၃ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်ကြားကလေးငယ်များအတွက်အထူးရည်ရွယ်ထားသော Foresight Linux မှဆင်းသက်လာသော distro ဖြစ်သည်။ Guxpris၊ Tux of Math Command၊ Super Tux၊ Super Tux Card၊ Foobillard, GNU Chess, Nibbles, Frozen Bubble, Super Maryo Chronicles, F-Spot Photo Manager, Firefox Web တို့ပါဝင်သည်။ အခြားသူများအကြား Browser, Banshee Media Player, Pidgin Instant Messenger နှင့် Totem Movie Player တို့ပါဝင်သည်။ Desktop Background ပေါ်ရှိပျားလေးများသည်ကလေးများကိုချက်ချင်းဆွဲဆောင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကလေးအတွက် distro ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းကိုအလွန်ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားပါ။
ဥပမာ - သင်သည် LiveCD မှသူတို့ကိုမ run ပါကဤ distros များမှလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် operating system တစ်ခုလုံးကို install လုပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့သည် Windows မှထိုကဲ့သို့သော application များမဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » ကလေးများအတွက် Linux ဖြန့်ဝေမှု
သင်မဖော်ပြထားသောကလေးများအတွက်ဖြန့်ဝေမှုနှစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်တင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အသုံးဝင်နိုင်သည် Edulibre OS နှင့် Edubuntumx ပထမ ဦး ဆုံး winkipedia ပါ ၀ င်သောကြောင့်စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ရန်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုပါ၊ ဒုတိယမှာ Castilian တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့် Edubuntu တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအခြေခံသည်။
သကြားသည် OLPC အတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် hard drive (သို့) operating system ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ USB မှတိုက်ရိုက်ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပို၍ ကောင်းသည်ဖြစ်စေလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုပေးထားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ ကလေးသည်ဒေတာအပါအ ၀ င်သူတို့၏ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို USB flash drive ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
link -> တုတ်ပေါ်မှာသကြား
အခြားတစ်ခုမှာ "အသက် ၆ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ " မဟုတ်ပါ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုသော်လည်းအကန့်အသတ်မရှိသည့်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ (ဥပမာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသောပုံကိုဥပမာ၊ ၆ နှစ်အရွယ်ဘူးကိုပရိုဂရမ်ပြုလုပ်မည်ဟုသင်ထင်သလား။ )
“ အတန်းထဲတွင်အသုံးပြုရန်လုံးဝဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်း” သည်မမှန်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၎င်းကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအလေးထားသည်။ ၎င်းကိုအခြားအချက်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်၊ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်ကလေးများအတွက်ပိုမိုသိရှိလိုသည်၊ သီလကောင်းသည်ဟုယူမှတ်သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် distros များစွာ၏ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သောကလေးများအတွက်ခက်ခဲသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုမလိုက်နာခြင်း။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ဒါဟာမုဆိုးမတွေ၊ မက်တွေနဲ့မတူဘူး ...
ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရှိနေစဉ် "class တွင်အသုံးပြုရန်" အတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်သောလက်ရှိအချိန်တွင် distro (သို့) activity pack မရှိပါ။ သင်ဒီမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ၊ ပျောက်နေပါသည်။
ဟယ်လို! ပထမ ဦး စွာကျေးဇူးတင်ပါသည် x မှတ်ချက်။ သကြားကို USB ဖြင့်သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်သည်။ ဒါဟာငါဖော်ပြရန်မေ့လျော့တစ်ခုခုဒါကြောင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ငါပြောခဲ့ရင်ငါဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်လို့ရမယ်လို့ငါစဉ်းစားနေလို့ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်၊ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပညာရေးအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သော distro ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်စာရင်းထဲတွင်ထည့်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တရားဝင်သကြားစာမျက်နှာကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားခြင်းသည်ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုသည်မှာ -“ သကြားသည်ကလေးငယ်တိုင်းအရည်အသွေးရှိသောပညာရေးအတွက်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရန်ကမ္ဘာချီကြိုးပမ်းမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာစကား ၂၅ မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သောသကြားလှုပ်ရှားမှုများသည်နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်မှကလေးငယ်တစ်သန်းသည်ကျောင်းတိုင်းတွင်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည်။ » ၎င်းသည်၎င်းကိုကျောင်းချိန်ညှိချက်များတွင်သာအသုံးပြုသည်ဟုမဆိုလိုပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းင်း၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည် Win သို့မဟုတ် Mac တို့နှင့်အလွန်ကွာခြားကြောင်းဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည် Sugar ကို“ ပထမခြေလှမ်း” အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန်အတွက်အသုံးပြုခြင်းသည် Linux distro များနှင့်ကွဲပြားသည်။ Linux လောက "ဆိုတာနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ အဲ့ဒါပဲ ...
တစ်ဖန်ကျေးဇူးတင်စကား x ။ ငါသည်သင်တို့၏လေ့လာတွေ့ရှိချက်အလွန်စူးရှတွေ့ရှိခဲ့!
Arturo rivera ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့စုဆောင်းမှုနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ့သမီးနှင့်ငါ့ဇနီး၏ကျောင်းသားများအတွက် distro ရွေးချယ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
Arturo Rivera သို့ပြန်သွားပါ
လူးဝစ် Francisco က Matus Beltran ဟုသူကပြောသည်
Luis Francisco Matus Beltran ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ ရွှင်လန်း! ရှင်ပေါလု။
ဤစာမျက်နှာတွင်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ခုရှိသည်။
တကယ်တော့ငါ့အသက် (၆) နှစ်အရွယ်တူလေးကချစ်သောကလေးများအတွက် online Shockwave ဂိမ်းများသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ Flash သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူနှင့်“ အပြန်အလှန်” (ခလုတ်နှိပ်ခြင်း) စသည့်အခါအလုပ်မလုပ်ပါ။ the Plugins များအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုစောင့်ရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကိုမေးရင်တော့ဒါက Linux အပြစ်အနာအဆာလို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Adobe ကကောင်းတဲ့ Linux plugins တွေကိုထုတ်မပေးဘူး။ Flash source code ကိုမဖွင့်ဘူး။
Acevedo ဘဲ ဟုသူကပြောသည်
သကြားနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းချက်အချို့ပေးပါ။ ၎င်းသည်စာသင်ခုံများ၊ ဖိုလ်ဒါများ၊ ၎င်းသည်ကလေး၏ဥပစာနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်ဗဟိုပြုသည့်သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ASi ဆိုသည်မှာပတ် ၀ န်းကျင်၊ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်တိုးတက်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ ဒီပုံကဆွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူး။ နာရီကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်များနှင့်အတူလိပ်၏လှုပ်ရှားမှုကိုသာပြသည်။ ၎င်းသည်လိုဂိုပြန်လည်ဖော်ပြသည့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သကြား၏အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လေ့လာမှုကိုအာရုံစိုက်ပါက၎င်း၏အဆိုပြုချက်သည်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သင်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများရှိသည်၊ များစွာသောဂိမ်းပုံစံဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် Gcompris အပြည့်အစုံကိုတစ် ဦး ချင်းလှုပ်ရှားမှုများ၊ tuxpaint၊ tuxmath၊ သင်္ချာ tetris၊ SIMCity၊ open source နည်းဗျူဟာဂိမ်း "Wsenoth for Bsenot" စသည်ဖြင့်သယ်ဆောင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဂိမ်းများနှင့်များစွာရှိသည်။
Pato Acevedo အားပြန်ပြောပါ
"portunhol" လိုမျိုးဘာမှမလုပ်မိအောင်သင်ကပေါ်တူဂီလိုရေးသင့်တယ်။ 🙂
ဒီနေရာမှာ Pandorga GNU / Linux လို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းများအတွက်ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုရှိသည်။ Ela é bem သည်ကလေးများအတွက်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။ isso အတွက်သင့်လျော်သောအမြင်ရှိသည့် bem ရှိသည်။ သို့မဟုတ်endereço do sítioé:
Um abraçoeparabéns pela publicação။
အလေးအနက်မှတ်ချက်များအားဖြင့် Obrigado ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြံပြုသော distro အနည်းငယ်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်ငါအများကြီးရပြီကြောင်းဝန်ခံဖို့ရှိသည်! အာခေါင်သည်ခန္တာကိုယ်၌ရှိနေသည် ၎င်းကိုဘရာဇီးလ် မှလွဲ၍ အခြားတိုင်းပြည်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းသင်သိပါသလား စပိန်လိုဗားရှင်းရှိပါသလား။
Juan Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ EdulibreOS မှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ထင်တယ်၊ အဲဒါဟာ Ubuntu-based ကလေးများအတွက်ဖန်တီးပေးပြီးဆရာများပေးသောသင်ကြားမှုကိုဖြည့်စွက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတိုင်းပြည်ဂွာတီမာလာမှာစာတတ်မြောက်မှုကွာဟချက်ကိုလျှော့ချဖို့ပိုပိုပြီးတိုးတက်လာတဲ့စီမံကိန်းရဲ့ဆက်နွှယ်မှုတွေကိုငါထားခဲ့ပါပြီ။ http://edulibre.net/ http://www.edulibreos.com/
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါကျွန်ုပ်သည်ဗင်နီဇွဲလား၌ပညာပေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သင်သိပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြန့်ဝေထားသော CANAIMA (Auyantepui del Kerepakupai-merú | Angel Falls) ဗားရှင်း ၃၀ တွင်ရှိပြီး CANAIMA EDUCATIVA ဖြန့်ဖြူးခြင်းလည်းရှိသည်။ www.canaimaeducativo .gob.ve) ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းကိုထိုနေရာတွင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ david! ကျွန်ုပ်တို့သည် CANAIMA အကြောင်းရေးသားမှုများစွာကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များအတွက်ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှင်ပေါလု။
ဒါကောင်းတယ် ဝမ်းသာပါတယ်!! သငျသညျအကြှနျုပျကိုနေ့၏သတင်းကောင်းကိုပေး၏။ 🙂
Zae Makhrus ဟုသူကပြောသည်
ငါ linux ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါ Qimo ကိုကြိုက်တယ်
Zae Makhrus ကိုပြန်သွားပါ
luisorlando ၁ ဟုသူကပြောသည်
Buendia Pablo: ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းက Agronomist အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိုသင်ကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတိုင်း Ibague (Tolima- ကိုလံဘီယာ) မြို့မှစာရေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ Orinoquia နှင့်ကိုလံဘီယာအမေဇုံရှိတောင်သူလယ်သမားများအားအကြံဥာဏ်ပေးမှသာကျွန်ုပ်ထံစာရေးနေပါသည်။ , WinXXX လောကမှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ Mac iMac ကိုဝယ်သောအခါ၎င်းသည် Linux သို့ခုန်ကူးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသော GNU ဖြန့်ကျက်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စမ်းသပ်ပြီးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းတွင်လုပ်ရန်စွမ်းရည်သို့မဟုတ်ဗဟုသုတလည်းမရှိသော်လည်း ၈ နှစ်အတွင်း linux၊ red hat, opensolaris စနစ်များကိုကြိုးစားပြီး gentoo ကိုကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းပြီမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေကလေးတွေအတွက် distro ကိုငါဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးပတ်အတွင်းမှာ Ibague မြို့မှာစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကဖေးလေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်။ စာအုပ်၊ ကော်ဖီ၊ အချိုရည်အသစ်တွေဖတ်ပြီးအပြင်၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုကူညီဖို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ linux ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ယနေ့အထိ linux အကြောင်းလေ့လာခဲ့ရာကိုလေ့လာရန် WinXXX နှင့်ဖောက်သည်များကိုပျင်းရိသည်။ ၎င်း၏ထုတ်ဝေမှုသည်ဤနှစ်များအတွင်း PC အများ (ဒေတာအဟောင်းများကို (၉၅၊ ၉၈၊ ၂၀၀၀ နှင့်ဤထက်များသောအချိန်) မှစ၍ အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို linux ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးသူတို့၏ winXX အဟောင်းနှင့်မတူဘဲ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုကြောင့်, ပါပလော, ငါ့အသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာပေါ်လာစေခြင်းငှါပconflictိပက္ခမေးမြန်းချက်နှင့်အတူနှောင့်အယှက် (ယခုငါ့လိုင်းနံပါတ် (1993) (2004) (8) နှင့်ငါ့ဖုန်းနံပါတ် 95 ဖြစ်ပါသည်, ယခုမှစ။ မျှော်လင့်ပါတယ်, ငါ့အီးမေးလ်က luisorlando1@aol.com), ငါ rebellion.org စာမျက်နှာပေါ်တွင်ငါတွေ့ဆုံခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်
Etienne d'Emmabuntus ဟုသူကပြောသည်
Etienne d'Emmabuntus အားစာပြန်ပါ
ငါကအခြားပို့စ်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည်, ငါ့နှိမ့်ချထင်မြင်ချက်အတွက်, ကလေးများအဘို့, အကောင်းဆုံးလူကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံး distro, လူဆိုးစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ၌မရေမတွက်နိုင်သောပရိုဂရမ်များရှိပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများကိုသိမ်းရန်နှင့်ဗွီဒီယိုချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအချိန်အတွက်မိဘထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားဖြန့်ချီမှုများတွင်မပါရှိသောအခြားအစီအစဉ်များစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကလေးများ၏အရောင်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါက၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အမှန်တကယ် desktop layout ဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် x ကိုမှတ်ချက်ပေး!
Cerebral Palsy ရှိသောကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့်ဆက်လက်ရှေ့ဆက်နိုင်ရန်ကူညီရန်လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်ရှာနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူသည်ဆရာ၊ ဆရာမနှင့်စိတ်ပညာသင်ကြားရေးတွင်သူအသုံးပြုသောမှတ်စုစာအုပ်ကြောင့်တိုးတက်မှုရခဲ့သည်။ ငါက Ubuntu ကိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီ operating system ကို notebook မှာ install လုပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ပရိုဂရမ်များစွာတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။ ငါ့သမီးကမြို့တော်ပုံနှိပ်စက်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာသောကြောင့်ဤနည်းအတိုင်းသာအလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်မရှာပါ။ ကိန်းဂဏန်းများသည်အခြားပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရန်နည်းလမ်းရှာမရသောကြောင့်သူက ၁၀ ကိုရေတွက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ တခါတရံအနည်းငယ်ပိုများသော်လည်း၊ တင်ထားသောအရာအားလုံးသည်ဖိုရမ်ရှိတစ်စုံတစ် ဦး သည် application တစ်ခုကိုသိလျှင်သိလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ငါ့သမီးသည် ၁၆ နှစ်ဖြစ်သည်။ သူသည်ပုံမှန်ကျောင်းတက်ရန်အထူးကျောင်းဆရာတစ် ဦး နှင့်တစ်နာရီခွဲခွဲတက်ရောက်ပြီးကျောင်းမှအတန်းဖော်များနှင့်အတူနေခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းနှစ်။
Nestor အယ်လ် Sharp က
ငါမင်းပြောချင်တာကမင်းရဲ့သမီးကိုမင်းမြှုပ်နှံထားတဲ့ခွန်အားနဲ့ကတိက ၀ တ်တွေကိုကျွန်တော်အရမ်းလေးစားမိတယ်။ ဒါဟာအထင်ကြီးလေးစားခြင်းမရှိဟုပြောကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေကသင့်ကိုဘာများကူညီပေးမလဲဆိုတာသင်မသိပါ၊ သို့သော်သင်ကြည့်နိုင်သည် ဒီအထူးသဖြင့်ဆောင်းပါးစိတ်ဝင်စားဖွယ်တစ်ခုခုရှာတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင်လည်းစစ်ဆေးနိုင်သည် ဒီအခြား link ကို.
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်နောက် link တစ်ခု လာဇရုကို